Caallirka indhaha ee carruurta - 1177 Vårdguiden
Ögoninflammation hos barn - somaliska
Caallirka indhaha ee carruurta
Waa caadi in uu carruurta indhaha caallir ama caabuq uga dhaco, taas oo badanaanba la xiriirta hargabka. Badanaaba toddobaad ayuu kaga baaba’aa iyadoo aan loo baahneen daaweyn.
Astaamaha lagu garto caallirka indhaha
Marka ilmaha caallir indhaha uga dhaco, indhaha guruxdooda ayaa gaduuta oo cuncuna. Wuxuu caallirkaasi ku dhacaa xuubka ifgudbiyaha ah oo ku dahaaran isha iyo gudaha baalasha indhaha. Caadi ahaan waxay ishu u muuqataa mid bararsan oo waxaa laga dareemi karaa inay wax xoqayaan. Waxaa kaloo isha ka soo daata daaf malax u eg. Malaxdaasina waxay keentaa in indhuhu isku dhegaan, gaar ahaan subaxdii. Dadka badankood labada indhood ayuu caallirkaasi uga dhacaa.
Marka carruurta caallir indhaha uga dhaco waxaa badanaaba keena infakshan uu sababay fiirus ama bakteeriyo. Caallirkaasi waa hab uu jirku isku difaaco. Caallirka indhuhu wuxuu kaloo ka iman karaa xasaasiyad ama in ilmaha ishu ka dhaawacantay ama saxar ka galay.
Sidee wax looga qabtaa caallirkaas indhaha?
Haddii indhaha ilmuhu baqbaq yeeshaan waxaa habboon in lagu masaxo xaashi jilicsan. Kadibna tuur xaashidaas si loo yareeyo khatarta isqaadsiinta. Waxaa kaloo baqbaqaas looga tirtiri karaa biyaha tuubbada oo qandac ah.
Haddii indhuhu isku dhegaan, siiba marka ilmuhu hurdo, waxaad isha ka saari kartaa suuf ama xaashi aad qoysey. Marka ishu waa ay kala furantaa oo si fudud ayaa baqbaqa looga tirtiri karaa.
Waxaa wanaagsan inaad barkinta ka beddesho maalin walba, cunugga waa in uu leeyahay shukumaan u gaar ah oo uu ku isticmaalo guriga, dugsiga ama xarunta xannaanada carruurta.
Ilmo dhowaan dhashay
Waa caadi in ilmaha dhowaan dhashay ay indhaha ka saaran yihiin baqbaq huruud ah. Taasna waxaa ugu wacan marinka ilmada oo ciriir ah marka loo eego indhaha carruurta waaweyn iyo dadka waaweyn. Haddii cunuggu yeesho baqbaq aad u badan waxaad kaga masaxi kartaa xaashi jilicsan.
Ilmuhu ma tegi karaa dugsiga barbaarinta?
Haddii cunugga indho gaduudan yahay oo xoogaa baqbaq ah leeyahay, sidiisa kalese u caafimaadqabo, kolkaas uma baahna in uu dugsiga ka joogo. Ilmaha xasaasiyad ama alleerji ka qaba indhaha iyaguna u baahna inay guriga joogaan. Laakiin haddii indhaha cunuggu isku dheggan yihiin oo maalintii marar badan u baahan yihiin in la tirtiro, kolka waxaa cunugga haya caallir indho oo xooggan. Xataa haddii cunuggu sidiisa kale u caafimaad qabo, waa in uu guriga joogaa oo ka joogaa dugsiga barbaarinta ama xannaanada carruurta, mar haddii la isqaadsiiyo iyo maadaama isha cunuggu u baahan tahay in la nadiifiyo maalintii marar badan.
Cunugga wuxuu carruurta u la midoobi karaa marka uu ka bugsoodo caallirka xooggan oo ishu aysan lahayn wax baqbaq ah.
Si fudud la isu qaadsiiyo
Carruurta yaryari si fudud ayey u kala qaadaan infakshanka indhaha maadaama ay wadacayaaraan. Siyaabaha cudurka la isku qaadsiiyo waxaa ka mid ah marka cunuggu isha gacanta ku marmaro oo kadibna ku taabto alaabta lagu cayaaro ama carruurta kale. Carruurta dhigata dugsiyadu si dhow isuma taabtaan, laakiin haddii caallirka ishu yahay mid xooggan waxay markaas u baahnaan karaan guriga joogaan haddii indhuhu cuncunayaan.
Sidee ayaan uga hortegi karaa in ilmuhu qaado caallir indhaha?
Haddii dad badan oo cunugga ka ag dhow ay hargab qabaan, waxaa markaas wanaagsan in gacmaha aad loo mayro si uusan infakshankaasi u sii fidin. Waxaa kaloo habboon in shukumaanada marar badan la iska beddelo, ha ahaato guriga, dugsiga barbaarinta ama xannaanada carruurta.
Doono daryeel caafimaad
Badanaaba caallirkaas indhuhu isaga ayaa iska baaba’a toddobaad gudahiis.
Haddii cunugga qabo caallir xooggan oo baqbaq wadata ama haddii uusan caallirkaasi ku joogsan toddobaad gudahiis, waa in lala xiriiraa rugta daryeelka caafimaadka. Haddii rugta daryeelka caafimaadku xiran tahay ama aadan waqti ka heli karin, waxaa markaas habboon inaad daryeel u doonato qaabbilaadda kaltanka leh ama gargaarka degdegga ah. Waxaa loo baahnaan karaa in caallirkaas lagu daaweeyo antibiyootiko. Cudurka la isma qaadsiiyo kadib marka laba maalmood lagu daaweeyo antibiyootiko oo haddii uu cunuggu awoodo oo caafimaad qabo wuxuu aadi karaa dugsiga barbaarinta ama xannaanada carruurta ama dugsiga caadiga ah.
Waxaa kaloo habboon inaad toos u aaddo rugta daryeelka caafimaadka ama gargaarka degdegga ah, waa haddii uu cunugga xasaasi ku yahay iftiinka ama ay il aad u xanuuneyso oo aad ka shakisan tahay in dhaawac ka gaaray.
Waxaad mar walba waci kartaa oo ka heli kartaa talasiinta xagga caafimaadka telefoonka 1177.
Sii akhriso warbixin ku saabsan hargabka carruurta.